Imigomo Nemibandela - I-Element Society
Ukusebenzisa iwebhusayithi yethu
Sicela ufunde lezi zimiso nemibandela ngokucophelela njengoba zilawula ukusetshenziswa kwakho kwale website. Ukusebenzisa kwakho le sayithi kubandakanya ukwamukelwa kwale Migomo Nemibandela, okusebenza kusukela ngosuku lokuvakashela kwakho okokuqala kusayithi. Uma le Migomo Nemibandela ingamukelwa ngokugcwele, sicela uqede ukusebenzisa leli sayithi ngokushesha. Uyavuma ukusebenzisa le sayithi kuphela ngezinhloso ezingokomthetho, futhi ngendlela engaphambisani namalungelo kwanoma yimuphi umuntu wesithathu, futhi ayivimbeli noma ivimbela ukusetshenziswa nokujabulela kwaleli sayithi.
Lewebhusayithi kanye nokwaziswa kwayo kunikezwa ngokusemthethweni njengokuthi 'akunjalo' ngaphandle kwemigomo yanoma yiluphi uhlobo, noma liveza noma lichazwe. Ukusetshenziswa kwaleli webhusayithi futhi ulwazi olukulo luyingozi kuphela yomsebenzisi. Ngeke kwenzeke ukuthi i-Element Society ibophezele noma yimuphi umonakalo ovela noma ohlobene nale website. Ikhambi lakho elilodwa kanye elilodwa lokunganeliseki ngaleli website kanye / noma ulwazi oluqukethwe is ukuyeka ukusebenzisa isayithi nolwazi.
I-Element Society ayivumeli ukuthi imisebenzi equkethwe kule sayithi ngeke iphazamiseke noma iphutha mahhala, noma lezo ziphutha zizolungiswa.
Ukuvikelwa kwegciwane, ukukhwabanisa namanye amacala
Senza konke okusemandleni ukuhlola nokuhlola izinto kuzo zonke izigaba zokukhiqiza, Nokho kufanele uthathe izinyathelo zakho zokuqapha ukuqinisekisa ukuthi inqubo oyisebenzisayo yokufinyelela lewebhusayithi ayikuvezi engozini yamagciwane, ikhodi engalungile yekhompyutha noma ezinye izinhlobo zokuphazamiseka ezingase zilimaze uhlelo lwakho lwekhompyutha.
Asikwazi ukwamukela noma yikuphi umthwalo wokulahlekelwa, ukuphazanyiswa noma ukulimala kwedatha yakho noma uhlelo lwakho lwekhompiyutha okungenzeka ngenkathi usebenzisa izinto ezitholakala kulewebhusayithi.Akumelwe usisebenzise kabi isayithi lethu ngokuzisa ngokufaka amagciwane, ama-trojans, izibungu, amabhomu womqondo noma ezinye izinto eziyingozi noma ezobuchwepheshe. Akumelwe uzame ukuthola ukufinyelela okungagunyaziwe kusayithi lethu, iseva lapho isayithi lethu ligcinwa khona noma kunoma iyiphi iseva, ikhompyutha noma i-database exhunywe kusayithi lethu. Akumelwe uhlasele isayithi lethu ngokuhlaselwa kwenkonzo yokuphika noma ukuhlaselwa kwenkonzo yokuphika.
Ngokuphula leli lungiselelo, uzobe wenza icala lobugebengu ngaphansi kwe-Computer Misuse Act 1990. Sizobika noma yikuphi ukuphulwa okunjalo kulabo abaphethe iziphathimandla ezifanele futhi sizosebenzisana nalawo magunya ngokudalula ubunikazi bakho kubo.
Ngeke sidlule imininingwane oyinikezelayo kunoma ubani ngaphandle kwalabo abashiwo kwinqubomgomo yethu yobumfihlo.
Yize yonke imizamo enengqondo eyenziwe ukuqinisekisa ukuchithwa kokuqukethwe, akukho mthwalo wemfanelo ongathathwa nganoma yisiphi iphutha noma ukushiyeka.
Ngenkathi senza konke okusemandleni ukugcina iwebhusayithi ye-Element Society isesikhathini, asihlinzeki noma yikuphi ukuqinisekiswa, izimo noma iziqinisekiso mayelana nokunemba kolwazi kusayithi. Asiyamukeli icala lokulahlekelwa noma ukulimala okubangelwa abasebenzisi bewebsite, kungakhathaliseki ukuthi yiyo ngqo, engacacile noma ehambisanayo, kungakhathaliseki ukuthi ibangelwa ukuhlukunyezwa, ukwephulwa kwenkontileka noma okunye.
Lokhu kuhlanganisa ukulahlekelwa kwe: imali engenayo noma imali, ibhizinisi, izinzuzo noma izinkontileka, ukulondolozwa okulindelwe, idatha, ukulungiswa kwempahla, impahla ebonakalayo noma ukuphathwa okulahlekile noma isikhathi sehhovisi ngokuphathelene nesayithi lethu noma mayelana nokusetshenziswa, ukungakwazi ukusebenzisa, noma imiphumela ukusetshenziswa kwesayithi lethu, noma yikuphi amawebhusayithi axhunywe kuwo nanoma yiziphi izinto ezithunyelwe kuwo. Lesi simo ngeke sivimbele izimangalo zokulahlekelwa noma ukulimala impahla yakho ebonakalayo noma nanoma yiziphi ezinye izimangalo zokulahlekelwa ngokuqondile kwezezimali ezingafakiwe ngaphandle kwanoma yiziphi izigaba ezibekwe ngenhla.
Lokhu akuthinteli umthwalo wethu wokufa noma ukulimala komuntu siqu ngenxa yokunganaki kwethu, noma umthwalo wethu wokukhohlisa okungalungile noma ukungaqondisi kahle ngokuphathelene nodaba oluyisisekelo, nanoma yikuphi omunye umthwalo ongenakukhishwa noma ukulinganiselwe ngaphansi komthetho osebenzayo.
Siyakwamukela futhi sikhuthaze amanye amawebhusayithi ukuze axhumane nolwazi olugcinwe kulawa makhasi, futhi akudingeki ucele imvume yokuxhumanisa ne-elementsociety.co.uk
Kodwa-ke, asikuniki imvume yokuphakamisa ukuthi iwebhusayithi yakho ihlotshaniswa, noma ivunyelwe yi-Element Society.
I-Element Society ayamukeli noma yikuphi icala phezu okuqukethwe kwalezi zindawo zesithathu. Ukuba khona kwalezi zixhumanisi akubanga ukugunyazwa kwamawebhusayithi, noma imibono evezwe kuwo. Ukuxhumanisa kwakho kulezi zingosi kuyingozi yakho siqu.
Ukubuyekezwa kule migomo
I-Element Society ingabuyekeza le Migomo Nemibandela nganoma isiphi isikhathi, futhi uyavuma ukuyibuyekeza ngezikhathi ezithile. Uma ukubuyekezwa kungamukeleki kuwe, uyavuma ukuyeka ukungena kuleli sayithi ngokushesha.
I-copyright, uphawu lokuhweba kanye nempahla yomqondo wengqondo
Ayikho ingxenye yale webhusayithi, kuhlanganise nolwazi, izithombe, ama-logos, izithombe, nokubukeka kwendawo yonke, kungabhalwa, kuphinde kushicilelwe, kusakazwe noma kubhalwe kabusha kunoma iyiphi indlela ngaphandle kwemvume ebhaliwe yabanikazi be-copyright ngaphandle kweyakho siqu, noma ukusetshenziswa okungewona ukuhweba.
Le migomo nemibandela iyolawulwa yimithetho yase-England naseWales. Izinkantolo eNgilandi naseWales ziyoba namandla ngokuphathelene nanoma yikuphi ukuphikisana okungase kuvele.
Uma ngabe yiyiphi yale Migomo nemibandela izobekwa ngokungekho emthethweni, engavumelekile noma engeke iqinisekiswe ngenxa yanoma yiliphi izwe noma izwe lapho le Migomo ihloselwe ukuphumelela khona, ngakho-ke kulelozinga lelo lingekho emthethweni, elingavumelekile noma elingenakuqiniswa , izosulwa futhi isuswe kule Migomo kanye neMigomo esisele izosinda, ihlale isasebenza ngokugcwele futhi isebenze futhi iqhubeke ibopha futhi iphoqelelwe.